Nahoana ireo Sinoa Vehivavy Mitady ny Fifandraisana amin'ny Tandrefana ny Olona
Nahoana ireo Sinoa Vehivavy Mitady ny Fifandraisana amin’ny Tandrefana ny Olona
Vehivavy shinoa no anisan’ny manintona indrindra, assertive sy manintona ny vehivavy eto amin’izao tontolo izao, miaraka amin’ny maro ny olona mavitrika ny fitadiavana fifandraisana aminy. Sinoa vehivavy dia ekena ho fanehoana fangorahana, mamy ary ny tena liana amin’ny hafa ary izany no mahatonga Tandrefana maro ny olona mazoto hitsena ny tsara mpiara-miasa amin’ny aterineto amin’ny alalan’ny fiarahana toerana. Misy maro ny sakana ho fivoriana ny olona sy ny fananganana ny tantaram-pitiavana fifandraisana rehefa misy toy izany ny fizarazarana ara-jeografika, saingy bebe kokoa ny vehivavy Shinoa mazoto mitady ny hahita mpiara-miasa avy any amin’ny firenena Tandrefana ary ireo sakana dia mora foana ny handresy. Fa inona no mandrisika ny vehivavy Shinoa ny mitady fifandraisana amin’ny Tandrefana ny olona, fa tsy hahita ny mpiara-miasa ao amin’ny fireneny. Misy ny antony maro mahatonga ny vehivavy Shinoa kokoa mba hanorina fifandraisana amin’ny Tandrefana ny olona, maro izay mifanaraka amin’ny kolontsaina dia mifototra.
Na dia maro aza ireo vehivavy Shinoa dia tena tia mianatra sy manatanteraka an-toerana ny andraikitra, maro no afa-po amin’ny fiainana ao amin’ny aloky ny Shinoa lehilahy sy tia ny fahaleovan-tena sy ny fahafahana izay nanolo-tena ireo vehivavy any amin’ny firenena tandrefana. Amin’ny alalan’ny fivoriana sy fanorenana ny fifandraisana amin’ny Tandrefana ny lehilahy, ny vehivavy Shinoa dia afaka manomboka ny fiainana izay mitovy kokoa, ary mamela azy ireo fahafahana izay no tsy mora hita ao an-tranony firenena. Western olona ireo koa dia tena mahaliana ny maro amin’ny Shinoa indrindra ny vehivavy ho toy ny fahasamihafana ara-kolontsaina sy ny fitondran-tena no tsara tarehy. Maro ny vehivavy Shinoa izay mitady ny fifandraisana amin’ny lehilahy avy any andrefana satria mankafy ny fialam-boly, ny fomba fiaina sy ny fifandraisana ara-tsosialy ao amin’ny tontolo Tandrefana. Na dia liana amin’ny ny fahafahana manana karazana finamanana faribolana, isan-karazany pastimes, hafa tanteraka ny fialam-boly safidy na ny toe-javatra eto an-toerana ny andrefana, ny vehivavy Shinoa dia lasa miha-nahasarika ny fahasamihafana eo amin’ny fomba fiainana eo amin’i Shina sy ny any amin’ny firenena Tandrefana. Be dia be toy izany koa fa maro ny Shinoa orinasa mahafantatra ny mety sy manintona ny firenena Tandrefana, vehivavy Shinoa matetika ny mitady fifandraisana amin’ny Tandrefana ny lehilahy, satria izy ireo no faly ny fahafahana sy tsy tapaka ny fampandrosoana any amin’ireo firenena ireo. Ny olon ny andrefana, dia niaiky ny maha-olona miasa mafy sy ny tsara sy mahafinaritra Shinoa vehivavy mahita fa ny safidy ny mankafy ny fiainana toy izany koa ny hahazoana ny fiainana dia mahay mandanjalanja kokoa any andrefana. Inona no kokoa, amin’ny fitomboan’ny fisian’ny Shinoa indostria manerana izao tontolo izao, vehivavy Shinoa dia tsy mila miahiahy momba ny fiainana tamin’ny firenena hafa, ary tanteraka ho very ny vokatra, ny kolontsaina, sy ny fomba fanao ao an-tranony. Tanàna maro no ‘Chinatowns’ ary izany dia manasongadina fotsiny ny fomba tsara tafiditra Shinoa vondrom-piarahamonina misy ao amin’ny kolontsaina Tandrefana. Vehivavy shinoa ny fitiavana ny fahafahana hihaona olona vaovao, mianatra fomba vaovao ny fiainana ary hahafantatra fa izy ireo dia afaka mankafy ny sakafo, ny fiteny, sy ny fomban-drazana sy ny kolontsaina ao an-trano na inona na inona firenena Tandrefana. Vehivavy shinoa hijery ny fomba mahafaly ny Tandrefana no mba handray azy ireo sy ny orinasa Shinoa ary izany dia mampiseho ny fahafahana mampiditra, mifampiresaka ary tia ny hafa ny orinasa avy any am-boalohany.
Mpivady maro izay mivory eo amin’ny iraisam-pirenena online mampiaraka toerana dia afaka mahita marimaritra iraisana amin’ny voalohany
Vehivavy shinoa dia afaka mangataka ny olona mikasika ny toerana tena sakafo Shinoa, na dia efa nitsidika ny firenena, manazava ny manan-karena Shinoa ny tantara sy ny fety, toy ny Taom-Baovao, raha ny fahafantarana fa ny Tandrefana amin’ny lehilahy dia azo inoana fa mba manana traikefa na fahalalana ao amin’ireo faritra efa.
Io fototra io dia tsara fanombohana hanakana mba hanorina fifandraisana sy ny tena namana mora foana sy ny fifaliana
← Wuhan, Shina Aiza no Hahitana ny Tovovavy ho an'ny Firaisana ara-nofo Iray Mans Travel
Ny zazavavy tsy misy maha-izy azy: ny Maha-zaza faharoa ao Shina - CNN →